Nkuzi na usoro iji muta otu esi edozi ma mezie ihe di iche-iche - Ikkaro
Oge gara aga, agụrụ m onye kwuru, sị:
Papa m akụzierela m na anyị ekwesịghị ime ihere na anyị na-emebi ihe ma anyị amaghị otú anyị ga-esi mezie ya.
Ma ọ bụ eziokwu. Echere m na blọọgụ kwesịrị ngalaba mmezi ebe m na-agba mbọ inyere ndị mmadụ aka idozi ụdị ihe niile site na microwave na playmobil.
Ọ bụghị ihe niile na-agbaji bụ eletrọniki. Egwuregwu dị mfe, otu mpempe akwụkwọ nwere ike idozi ya ma eleghị anya ọ dịghị mfe dịka ọ dị ka ọ bụrụ na anyị amaghị etu esi arụ ọrụ ma ọ bụ na anyị amaghị otu esi emeghe mpempe akwụkwọ.
M nwere ike ikwu na ị na-a lee anya ee ma ọ bụ ee na nchịkọta nke ndị na-eme ya na ndozi gosipụtara gịnị ka anyị mere
Kedu ihe anyị ga-ahụ
Kindsdị nrụzi niile ị nwere ike ịme ma ọ bụ kọwaa. Dị ka m kwuru ọ bụghị naanị ngwa ụlọ. ma ihe ndị ọzọ nwere ike mgbe ụfọdụ iyi dị nnọọ mfe.
Anyị ga-anwa ịhụ mgbaàmà ma ọ bụ otu esi amata nsogbu na otu anyị nwere ike isi gboo.
Dozie ma jigharịa. Anyị ga-eri obere ma gbatịa ndụ nke ihe anyị.
M na-erite uru nke gburugburu idozi mobiles Ana m eme ịkọwa na edekọ ọtụtụ ihe ndị enyi m na ndị ezinụlọ m na-agwakarị m ka m mee. Na nke a m na-akọwa esi wụnye ngwa APK na gam akporo.
Ana m aga n'ihu na isi, ọ bụrụ na ịchọrọ ịma ihe APK bụ na mgbe ị ga-achọ ịwụnye otu, gaa na njedebe nke isiokwu ahụ.
N'okwu m Aga m etinyegharị Storelọ Ahịa Play nke na-arụ ọrụ adịghị mma na mkpanaka nke anyị ga-eji na-enweghị SIM nna ọgọ m ga-egwu. Enweghị m ike imeghe ya, ọbụnadị ịtọgharị ụlọ ọrụ ahụ ma ọ dị m ngwa ngwa ịwụnye ngwa ahụ karịa ịhụ ihe na-eme smartphone ma ọ bụ gbanye ya.
N'isiokwu mmezi a, anyị ga-ahụ etu unlock kpọghee ekwt a mobile onye ihuenyo e tiwara ka ịnweta draịvụ ike na-enwe ike nyefee na-agbake faịlụ, oyiyi na vidiyo. Oge ụfọdụ gara aga, nwunye m tinyere ekwentị na BQ Aquaris E5 na enyo ya mebiri, o yighị ka ọ ga-ekwubiga okwu ókè, mana ala anaghị arụ ọrụ. Nwere ike ịhụ ya, mana ịnweghị ike iji ya. Ebe nsogbu bịara. Anyị enweghị ike ịmeghe ekwentị ahụ, n'ihi na mpaghara ụkpụrụ anaghị anabata mmetụ aka. Ma n'ezie anyị enweghị ike ịnweta draịvụ ike ma were foto na vidiyo ọ chekwara.
Anọ m na-ele ọtụtụ nhọrọ iji nwee ike ịse foto. Gbanwee ihuenyo ahụ, ọtụtụ ngwanrọ nke na-agbaji usoro na usoro a họọrọ, eriri OTG, nginggbanwe ihuenyo na nke a bụ nhọrọ kachasị oke ọnụ, n'ihi na nnọchi nke a abụghị ihe dị ọnụ ala ma dịka ekwentị nwere afọ ya, anyị kpebiri gbanwee ya maka nke ọhụrụ. M na-agbalị ịnakọta ozi na isiokwu a ma hapụ vidiyo site na iji eriri OTG.
Ndị na-eme ya, dozie na Mee N'onwe Gị gosipụta
M na a mmiri n'etiti isi Na-egosi na Mee N'onwe Gị, Mmezi Onwe Gị, Ndị Na-eme Ya, nke m chọtara na Internetntanetị. A na-etolite ọtụtụ echiche banyere ikike anyị dị ka ndị na-azụ ahịa na obere banyere ọrụ anyị na ibu ọrụ anyị. Isiokwu nwere njikọ chiri anya na atụmatụ a ma ama
Ọ bụrụ na ịnweghị ike idozi ya, ọ bụghị nke gị
Ha dịtụ ochie, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kpochapụwo mana dịka ọ na-atọ ụtọ. Enwerem ya na draịva ruo ogologo oge, echekwara m na ụzọ ahụ kwesịrị ịnọ na Ikkaro.
Ngosipụta nke ihe ngosi ndị a Ọ bụ mmalite iji tụgharịa uche dịka m kwuburu gbasara ikike, ọrụ na ọrụ anyị nwere dịka ndị ahịa. Ikwesighi iji ihe ọ bụla gwurie egwu, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ihe dị na weebụsaịtị, ị gaghị ekwenye. Ga-azụlite echiche dị oke egwu. Ekwere m na ihe o kwuru? Ọ bụ eziokwu? Kedu ka o si baara m uru dị ka onye na-azụ ahịa, ndị ahịa ndị ọzọ, ụwa? Kedu onye ihe a na-afụ ụfụ? Enwere ọtụtụ ajụjụ anyị kwesịrị ịjụ onwe anyị yana na anyị kwesịrị ijikọ aka na ụkpụrụ omume, ụkpụrụ nke oriri.
Ndozi Onwe gị site na iFixit.com
Esi edozi cassette teepu
Achọtala m kaseti m ochie m, ọtụtụ ndị nwere egwu na ọtụtụ ndị ọzọ nwere akụkọ na egwu ụmụaka. N'iji eziokwu ahụ bụ na Clio ka nwere redio kaseti, achọrọ m ịwụnye nwa m obere teepu iji hụ ma ọ masịrị ha. Ọ dị m nwute na m ga-atụfu ha.
Mana otutu agbajiri, teepu adọwa. Ya mere aga m akọwa etu ha siri dozie, dị ka ụtụ, n'ihi na echeghị m na enwere ọtụtụ ndị nwere mmasị idozi ha, mana ọ bụrụ na mmadụ adaba n'aka gị ma chọọ ịnụ ya, ma eleghị anya ntinye ga-aba uru
Etu esi egbutu kaadi SIM site na mini SIM ka micro sim na nano sim
Enwetara m nke m Google Nexus 4. Aga m anwale ya ma chọpụta na ọ na-eji ya Micro SIM :-(
Ezi uche dị na ya bụ ịga maka a SIM kaadị oyiri, ma ha na-akwụ € 5 (ee, ọ bụ n'efu tupu) Ya mere, ị ga-achọ ngwọta nke ụlọ ma nke a gafere ewepụtụ kaadị n'ụlọ iji tọghata mini SIM ka Micro SIM.
Ee, amaara m na mgbe imesịrị € 300 na ekwentị, king 5 king XNUMX adịghị ka nke ukwuu, mana nke a abụrụla okwu onwe onye.
Mmelite: N'oge a, pre-cut cards na-abịa, n'ihi ya, ọ dị mfe ịgbanwe site n'otu nha gaa n'ọzọ. Ma ọ bụrụ na ị nwere SIM ochie a aghụghọ a ka ga-arụ ọrụ maka gị. Ọ bụrụ na ịchekwaa € 5, nwee kọfị na ahụike m
Ọfọn, tupu anyị ebipụ dị ka ndị nzuzu, ntakịrị banyere Kaadị SIM